Ụdị atọ maka Mgbasa Ozi Ụlọ Ọrụ Njem: CPA, PPC, na CPM | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga nke ọma na ụlọ ọrụ nwere asọmpi dị ukwuu dị ka njem, ịkwesịrị ịhọrọ usoro mgbasa ozi nke dabara na ebumnuche azụmahịa gị na ihe ndị ka mkpa. Ọ dabara nke ọma, enwere ọtụtụ atụmatụ maka otu esi akwalite akara gị n'ịntanetị. Anyị kpebiri iji ndị kasị ewu ewu n'ime ha tụnyere ma nyochaa uru na ọghọm ha.
N'ikwu eziokwu, ọ gaghị ekwe omume ịhọrọ otu ụdị nke kachasị mma n'ebe niile na mgbe niile. Ndị isi ụdị na-eji ọtụtụ ụdị, ma ọ bụ ọbụna ha niile n'otu oge, dabere na ọnọdụ ahụ.
Ụdị Pay-Per-Click (PPC).
Pay-kwa-pịa (PPC) mgbasa ozi bụ otu n'ime ụdị mgbasa ozi kacha ewu ewu. Ọ na-arụ ọrụ dị nnọọ mfe: azụmahịa na-azụta mgbasa ozi na mgbanwe maka clicks. Iji zụta mgbasa ozi ndị a, ụlọ ọrụ na-ejikarị nyiwe dị ka Mgbasa ozi Google na mgbasa ozi gburugburu.
PPC na-ewu ewu na ụdị n'ihi na ọ dị mfe ma dị mfe ijikwa. Dabere na mkpa gị, ị nwere ike ikpebi ebe ndị na-ege gị ntị bi, na-agbakwunye àgwà ọ bụla ịchọrọ. Ọzọkwa, mpịakọta okporo ụzọ enweghị oke (naanị mmachi bụ mmefu ego gị).
Omume a na-emekarị na PPC bụ ịre ahịa mgbe ụlọ ọrụ na-akwado usoro akara nke ndị ọzọ ka ha merie ha ma dọta ndị ahịa ha. Ọtụtụ mgbe, a na-amanye ụlọ ọrụ ime nke a n'ihi na ndị asọmpi na-azụta mgbasa ozi dabere na arịrịọ akara ndị asọmpi. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-achọ Booking.com na Google, ọ ga-abụ nke mbụ na ngalaba efu mana mgbasa ozi na Hotels.com na ụdị ndị ọzọ na-ebu ụzọ. Ndị na-ege ntị na-emecha na-agakwuru onye zụrụ mgbasa ozi PPC; N'ihi ya, Booking.com kwesịrị ịkwụ ụgwọ ọbụlagodi mgbe ọ bụ onye ndu nke ọchụchọ efu. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ị na-achọ egosighi na ngalaba mgbasa ozi, ọ nwere ike tufuo ndị ahịa n'ehihie. N'ihi ya, mgbasa ozi dị otú ahụ agbasawo ebe nile.
Otú ọ dị, ụdị PPC nwere nnukwu mwepu: a naghị ekwe nkwa mgbanwe. Ụlọ ọrụ nwere ike nyochaa nsonaazụ mkpọsa ka ha nwee ike ịkwụsị nke na-adịghị arụ ọrụ. Ọ ga-ekwe omume na ụlọ ọrụ na-emefu karịa ihe ọ na-akpata. Ọ bụ ihe ize ndụ kachasị mkpa ị ga-atụle n'oge niile. Maka mbelata, ana m akwado ijide n'aka na mkpọsa gị erutela ndị na-ege gị ntị. Debe uche mepere emepe ma nọgide na-agbanwe agbanwe.
Ọnụ-kwa-mile (CPM) Nlereanya
Cost-Per-Mile bụ otu n'ime ụdị kachasị ewu ewu maka ndị chọrọ inweta mkpuchi. Ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ kwa otu puku nlele ma ọ bụ echiche nke mgbasa ozi. A na-ejikarị ya na mgbasa ozi ozugbo, dị ka mgbe mgbasa ozi na-ekwu maka ika gị na ọdịnaya ya ma ọ bụ ebe ọzọ.
CPM na-arụ ọrụ nke ọma maka ịkwalite mmata ika. Ụlọ ọrụ nwere ike ịlele mmetụta site na iji ihe ngosi dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, iji bulie njirimara ika, ụlọ ọrụ ga-enyocha ọnụọgụ ugboro ndị mmadụ na-achọ akara ahụ, ọnụ ọgụgụ ahịa, wdg.
CPM dị n'ụwa niile ahịa ahịa, nke ka bụ ubi ọhụrụ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, enweela mmụba dị ukwuu na ndị na-eme ihe na ụlọ ọrụ ahụ.
A na-eji nha ahịa ahịa azụmaahịa ụwa niile na $ 7.68 ijeri na 2020. A na-atụ anya ịgbasa na ọnụego uto kwa afọ (CAGR) nke 30.3% site na 2021 ruo 2028.
Agbanyeghị, CPM nwekwara ụfọdụ ndọghachi azụ. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ajụ atụmatụ a na mmalite nke azụmahịa ha n'ihi na ọ na-esiri ike ịlele mmetụta mgbasa ozi ndị a.
Ọnụ-kwa-ọrụ (CPA) Nlereanya
CPA bụ ihe nlereanya kachasị mma maka mma okporo ụzọ - azụmahịa na-akwụ naanị maka ire ere ma ọ bụ omume ndị ọzọ. Ọ dị mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịmalite ụlọ ọrụ mgbasa ozi na awa 2, dị ka PPC, mana nsonaazụ ya bụ nke a pụrụ ịdabere na ya. Ọ bụrụ na ịnweta ya ozugbo na mmalite, a ga-atụnye nsonaazụ ya n'akụkụ ọ bụla. Nke a ga-ahapụ gị ka iru ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya ma nye gị data ọnụọgụ gbasara arụmọrụ mkpọsa gị.
Amaara m ihe m na-ekwu: netwọk mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ m - Njem njem - na-enye ọrụ na ụdị CPA. Ụlọ ọrụ abụọ na-eme njem na ndị na-ede blọgụ njem na-enwe mmasị na nkwado dị mma ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ naanị maka ihe omume ahụ, ma n'otu oge ahụ na-enweta mkpuchi na mmetụta, na ndị nwe okporo ụzọ na-enwe mmasị na mgbasa ozi ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị mkpa nye ndị na-ege ha ntị, ka ha na-enweta ọrụ dị elu. ma ọ bụrụ na ndị ahịa zụrụ tiketi ma ọ bụ depụta ụlọ oriri na ọṅụṅụ, njegharị ma ọ bụ ọrụ njem ndị ọzọ. The Mgbakwunye ahịa n'ozuzu - na Njem njem karịsịa - na-eji nnukwu ụlọ ọrụ njem dị ka Booking.com, Getyourguide, Kpugheere na ọtụtụ puku ụlọ ọrụ njem ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na CPA nwere ike ịdị ka atụmatụ mgbasa ozi kachasị mma, ana m akwado iche echiche nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere olile anya itinye nnukwu akụkụ nke ndị na-ege gị ntị, nke a agaghị abụ naanị atụmatụ gị. Otú ọ dị, mgbe ị tinyere ya na atụmatụ azụmahịa gị, ị ga-erute ndị na-ege ntị buru ibu n'ihi na ị ga-ejikọta ndị na-ege gị ntị. Ọ gaghị ekwe omume mgbasa ozi gburugburu imezu nke a.
Dịka ndetu ikpeazụ, ebe a bụ ndụmọdụ: ọ dị mkpa icheta na ọ nweghị atụmatụ edepụtara bụ ihe ngwọta kacha mma. Enwere ọnyà na nke ọ bụla n'ime ha, yabụ hụ na ịchọta ezigbo ngwakọta nke atụmatụ dabere na mmefu ego na ebumnuche gị.
Tags: ụgwọ kwa omumeụgwọ otu milena-eri kwa pukucpacpmahịa ahịakwụọ ụgwọ kwa Pịappcelekọta mmadụ media
WordPress: Iji jQuery Mepee windo LiveChat site na ịpị njikọ ma ọ bụ bọtịnụ Iji Elementor